‘साङ्लो २’ बनाउँदैछन् विराज ? - चौतारीपोष्ट अनलाईन
‘साङ्लो २’ बनाउँदैछन् विराज ?
विश्वमा हेर्ने हो भने बक्सअफिसमा नाफा कमाएका फिल्मको सिक्वेल निर्माण हुने गरेका छन् । हलिउड/बलिउड हुँदै पछिल्लो केही वर्षयता नेपालमा पनि यो ट्रेन्ड निकै फस्टाएको छ । ‘नाईं नभन्नू ल’, ‘प्रेमगीत’, ‘छक्का पञ्जा’, ‘ए मेरो हजुर’ सिरिज यसका उदाहरण हुन् । अहिले नेपालमा नयाँ नाममा बनेका फिल्मभन्दा हिट फिल्मका सिरिजलाई नै दर्शकले विश्वास गरेको अवस्था छ ।
४ वर्षपछि नेपाली फिल्ममा फर्किएका अभिनेता विराज भट्ट पनि शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘साङ्लो’ को सिक्वेल निर्माणको सोचमा देखिएका छन् । फिल्म बक्सअफिसमा लगानी उठाउन संघर्ष गरिरहँदा दर्शकबाट सिक्वेलको चर्को माग आएका कारण आफू ‘साङ्लो २’ को बारेमा सोचिरहेको उनले बताए । तर, सिक्वेल बनाउने निर्णय गरिनसकेको उनी बताउँछन् ।
आइतवार हलमा दर्शक प्रतिक्रिया बुझ्न पुगेका अभिनेता विराज भट्टले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘दर्शकले फिल्म एकदमै रुचाउनुभएको छ । उहाँहरुले नै ‘साङ्लो’ को सिक्वेल बनाउन आग्रह गर्नुभएको हो । फिल्मले जुन हिसाबमा व्यापार गरिरहेको छ त्यसलाई हेर्दा सिक्वेल बन्ने सम्भावना प्रवल छ । दर्शकहरुले चाहनुभयो भने म अर्को फिल्म ‘साङ्लो २’ नै निर्माण गर्छु ।’
फिल्म हेर्न हल आउने दर्शक प्रायः युवा पुस्ता बढी देखेको उनले बताए । ‘पहिला पनि मेरो फिल्म हेर्न युवा पुस्ताका दर्शक नै धेरै हुन्थे । अहिले पनि युवा पुस्ता नै बढी देखेँ । फिल्म राम्रो बन्यो भने हरेक पिढीले इन्जोय गर्छ भन्ने कुरा ‘साङ्लो’ ले प्रमाणित गरेको छ,’ उनी सुनिए । आफू नेपाली फिल्ममा सक्रिय हुनुपर्ने दर्शकको चाहना अब पूरा गर्ने पनि उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
दर्शकले आफूलाई पहिला र अहिले गर्ने मायामा कुनै अन्तर नआएको पनि विराजको बुझाइ छ । ‘लामो समय नेपाली फिल्मबाट टाढा हुँदा दर्शकले पहिला जस्तो साथ र माया दिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एकखाले डर चाहिँ ममा थियो । तर, दर्शकले मलाई गर्ने मायामा कुनै कमी आएको देखिनँ,’ उनले भने । ‘साङ्लो’ ले विशेषगरि सिंगल थिएटरमा दर्शकको राम्रो साथ पाइरहेको छ ।
अभिनेता विराज भट्ट स्वयंले निर्देशन गरेको फिल्म हो यो । यसमा उनको जोडी पूर्व मिस नेपाल निकिता चाण्डकसँग बाँधिएको छ । दर्शकले फिल्ममा विराजको एक्सन विशेष रुचाएका छन् । कथावस्तु र प्रस्तुतीलाई लिएर भने मिश्रित प्रतिक्रिया छ । फिल्ममा प्रकाश शाह, कामेश्वर चौरासिया, जयनन्द लामा, आरपी पन्त, शिशिर भण्डारीलगायतका कलालाकारहरुको अभिनय छ ।
Prevनसीमको कीर्तिमानमा पाकिस्तान इनिङ अन्तरले विजयी
Next‘प्यारासाइट’ निर्देशकले भने- ‘अस्कार अवार्ड पाँच टुक्रा पार्न चाहन्छु’